Isixazululo segumbi lenkomfa | Brocade Smart Space Technology Co., Ltd.
Igumbi lomhlangano lesimanje ligcwele abantu abanamadivayisi ahlukene anezinhlobo ezahlukahlukene zokufakwayo. Bonke bazodinga ukuxhuma, ukwethula nokusebenzisana. Kubalulekile ukuthi lokhu kuxhumana kusheshe futhi kube enembile ngokudluliswa kwedatha okuzinzile futhi okulula ukuhlanganyela.
I-Brocade inikeza izixazululo ezinamacala onke nezingenazintambo kubalingani bebhizinisi nabamabhizinisi. Sisebenzisa ubuchwepheshe be-HDMI ukuguqula igumbi lakho lenkomfa libe yindawo yokusebenza nephumelelayo.
Isixazululo Esinentambo: Isixazululo Samakamelo Enkomfa esine-4K HDMI Extender kit
Isixazululo segumbi lengqungquthela elenzelwe izintambo i-Brocade 4K HDMI Extender-DK02 senzelwe ukuthi singabizi, sisebenziseke kalula, sinembile ukusisebenzisa, futhi sisebenze ngamandla njengesethulo kanye nesisombululo sokuphathwa kwesiginali somsindo nesibonwa. Isixazululo siza nesidlulisi sedeskithophu ngokufaka oku-1 HDMI, isamukeli esifakwe odongeni ngokukhipha i-1 HDMI, ama-adaptha ama-2 noxhumano lwentambo lwe-1 Cat5e / 6. Lesi sixazululo sifaka nomthombo wesiginali njengekhompyutha enembobo eyi-1 HDMI kusuka kudeskithophu nesibonisi esine-1 HDMI port yezethameli zengqungquthela. Imininingwane isidlulisi sixhuma ikhompyutha ngentambo eyi-1 HDMI futhi sixhuma isamukeli ngekhebuli elingu-1 Cat5e / 6, ngenkathi umamukeli exhuma isibonisi ngentambo ye-1 HDMI futhi axhume okudlulisa ngentambo efanayo yeCat5e / 6. Ngobuchwepheshe be-HDMI, ikhithi ingadlulisa ividiyo ye-4K / 60hz UHD iye ezinyaweni ezingama-197 ngenkathi amasiginali we-1080p angafika ezinyaweni ezingama-393. Isixazululo segumbi lengqungquthela elenzelwe izintambo sithatha indawo yamahora wokuklama nokufaka futhi siyisixazululo esifanelekile semakethe yezobuchwepheshe ye-AV.
Isixazululo Esingenantambo: Isixazululo Samakamelo Enkomfa esine-Wireless HDMI extender kit
Isixazululo segumbi lenkomfa engenantambo ye-Brocade wireless HDMI isisombululo esihle samakamelo enkomfa. Isixazululo siza nesidluliseli sedeskithophu ngokufaka oku-1 HDMI, isamukeli esifakwe odongeni ngokukhipha okungu-1 HDMI kanye nama-adapter ama-2. Lesi sixazululo sifaka nomthombo wesiginali njengekhompyutha ene-1 HDMI kusuka kudeskithophu kanye nesibonisi esine-1 HDMI yezethameli zengqungquthela. Imininingwane isidlulisi sixhuma ikhompyutha ngentambo eyi-1 HDMI ngenkathi umamukeli exhuma isibonisi ngentambo ye-1 HDMI. Ngobuchwepheshe be-HDMI ne-WIFI engenantambo, ikiti ingadlulisa ividiyo ye-4K / 30hz UHD iye ezinyaweni ezingama-197 ngenkathi amasiginali we-1080p angahamba aze afike ezinyaweni ezingama-656. Kulula ukusebenza. Vele uxhume bese udlala. Akukho ukufakwa komshayeli okudingekayo. Nge-CTS200 ungabelana ngokusemadivayisi wakho ahlukahlukene kusikrini sesethulo ngokuchofoza okukodwa.